Ọ̀ Bụ Eziokwu Maka na Ọ Dị n’Ịntanet?
“Na-akwanyerenụ Ndị Dị Otú Ahụ Ùgwù”
Ị̀ Na-ahụ Otú Chineke Si Enyere Gị Aka?
“Nyekwuo Anyị Okwukwe”
AKỤKỌ NDỤ Ọ Kwaghị Mmakwaara Maka Ihe O Kpebiri Mgbe Ọ Na-eto Eto
Ekwela Ka Ihe Ọ Bụla Dọpụ Uche Gị n’Ozi Jehova
Na-atụgharị Uche n’Okwu Chineke Nakwa n’Ihe Ndị O Kere
AKỤKỌ NDỤ Ịbịaru Chineke Nso Dị M Mma
‘Onye Na-amaghị Ihe Na-ekweta Okwu Niile’
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọktoba 2015
GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Maya Mixe Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Otu ọkọ akụkọ ihe mere eme bụ́ onye Jamanị aha ya bụ August von Schlözer (1735-1809) dere, sị: “Onye na-anaghị agụ akwụkwọ akụkọ dị nzuzu; onye kadị nzuzu bụ onye kwetara ihe naanị maka na e kwuru ya n’akwụkwọ akụkọ.”
IHE karịrị narị afọ abụọ gara aga, ndị mmadụ anaghị atụkwasị ihe niile e dere n’akwụkwọ akụkọ obi. Taakwa, ọ bụghị ihe niile anyị hụrụ ma ọ bụ gụọ n’Ịntanet ka anyị kwesịrị ikweta. Ihe dị́ n’Ịntanet karịrị akarị. Nkà na ụzụ na-emekwa ka ịchọta ha dị́ mfe. E nwere ndị bụ́ eziokwu, baa uru, ha anaghịkwa akpata nsogbu. Ma, ọtụtụ bụ ụgha, ha abaghị uru, ha na-akpatakwa nsogbu. N’ihi ya, anyị kwesịrị ịna-ahọ ihe anyị ga-agụ ahọ. Ndị malitere ịga n’Ịntanet ọhụrụ nwere ike iche na ihe ọ bụla a kọrọ bụ eziokwu n’ihi na ọ dị n’Ịntanet ma ọ bụkwanụ na enyi ha ziteere ha ya n’ozi iimel. Ha nwere ike ikweta ya ọ bụrụgodị na ọ dara ka ihe na-emeghị eme. Ma, Baịbụl dọrọ anyị aka ná ntị, sị: “Onye ọ bụla nke na-amaghị ihe na-ekweta okwu niile, ma onye maara ihe na-echebara nzọụkwụ ya echiche.”—Ilu 14:15.
Anyị kwesịrị ịbụ ndị ma ihe. Ọ pụtara ịna-akpachapụ anya, na-ekweta naanị ihe anyị ma na ọ bụ eziokwu. A gaghịkwa aghọgbu anyị ikweta ihe na-abụghị eziokwu, ọ sọkwa ya bụrụ na a na-akọ ya ebe niile. Gịnị ga-enyere anyị aka ịma ihe? Ihe mbụ ị ga-ajụ onwe gị bụ: ‘Ebe e si nweta akụkọ a n’Ịntanet ọ̀ bụ ebe a tụkwasịrị obi? Ka ọ̀ bụ ebe onye ọ bụla nwere ike ide ihe sọrọ ya? Ka ọ̀ bụdị na a maghị ebe e si nweta ya? È nweela ndị a tụkwasịrị obi kwuru na ihe ahụ abụghị eziokwu?’ * Ọ bụrụ otú ahụ, gosi na i nwere uche. (Ilu 7:7) Akụkọ dawa ka ihe na-emeghị eme, o nwere ike ịbụ na o meghị eme. Ị́ gụọ ihe na-adịghị mma banyere ndị ọzọ, chee banyere ndị ga-achọ ịna-akọsa ya nakwa ihe mere ha ji chọọ ịkọsa ya.
Ị̀ NA-EZIPỤKARỊ OZI E ZITEERE GỊ?
Ụfọdụ ndị nwere ike izipụrụ ndị ọzọ ozi e ziteere ha n’ebughị ụzọ chọpụta ma ọ̀ bụ eziokwu ma ọ bụ chee ihe o nwere ike ịkpata. O nwere ike ịbụ na ha chọrọ ịbụ ndị mbụ zipụrụ ozi ahụ. (2 Sam. 13:28-33) Ma, ọ bụrụ na anyị ‘ma ihe,’ anyị ga-eche banyere nsogbu o nwere ike ịkpatara mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ gbasara.
Mmadụ nwere ike ọ gaghị agbalị ịmata ma ihe ọ chọrọ izipụ ọ̀ bụ eziokwu n’ihi na ime otú ahụ ga-egbu ya oge. O nwere ike iche na ndị o zigaara ya ga-eji aka ha chọpụta. Ma ọ ga-egbukwa ndị ahụ oge ịchọpụta ma ọ̀ bụ eziokwu. (Efe. 5:15, 16) Kama izipụwa ozi anyị na-amaghị ma ọ̀ bụ eziokwu, ọ ka mma ichewe, sị: “Ọ bụrụ na ọ na-eme m obi abụọ, ka m kagbuo ya.”
Jụọ onwe gị, sị: ‘M̀ na-ezipụkarị ozi e ziteere m? Ò nweela mgbe m rịọrọ ndị mmadụ mgbaghara maka izigara ha ozi na-abụghị eziokwu? Ò nweela onye sịrị m kwụsị izitere ya ozi iimel e ziteere m?’ Cheta na ndị ị na-ezigara ozi na-agakwa n’Ịntanet. N’ihi ya, ha nwere ike iji aka ha nweta ihe ọ bụla masịrị ha. Ha agaghị achọ ka e si n’iimel na-ezitere ha ọtụtụ akụkọ, fim, ma ọ bụ foto ndị na-atọ ọchị. Anyị ekwesịghịkwa ịna-ezigara ndị ọzọ okwu ndị anyị tinyere na teepụ ma ọ bụkwanụ okwu anyị si na teepụ depụta. * Chetakwa na ọ bụrụ na mmadụ ejiri aka ya mee nchọnchọ, gụọ amaokwu Baịbụl ndị e dere, ma ọ bụ kwadebe ihe ọ ga-aza n’ọmụmụ ihe, ọ ga-abara ya uru karịa onye ọzọ izitere ya ihe ndị a.
M̀ kwesịrị izigara onye ọzọ ozi iimel a?
Gịnị ka i kwesịrị ime ma ị́ gaa n’Ịntanet hụ ihe na-abụghị eziokwu banyere nzukọ Jehova? Mechie ya ozugbo. Ụfọdụ chere na ha kwesịrị izigara ya ndị ọzọ iji mata ihe ha chere. Ma ime otú ahụ bụ ịgbasakwu ozi ahụ. Ọ bụrụ na ihe anyị hụrụ n’Ịntanet na-enye anyị nsogbu n’obi, anyị kwesịrị ikpegara Jehova ekpere ka o nye anyị amamihe. Anyị nwekwara ike ịgakwuru ụmụnna ndị tozuru okè ka ha nyere anyị aka. (Jems 1:5, 6; Jud 22, 23) O kwesịghị iju anyị anya ma ndị mmadụ kwuwe ihe na-abụghị eziokwu banyere anyị. Ọ bụ ihe e mere Jizọs. Ọ gwakwara ndị na-eso ụzọ ya na ndị iro ha ga na-akpagbu ha, ‘na-aghagide ha ụgha, na-ekwukwa ụdị ihe ọjọọ niile megide ha.’ (Mat. 5:11; 11:19; Jọn 10:19-21) Anyị kwesịrị iji “ikike iche echiche” na “nghọta” mata mgbe mmadụ na-aghara anyị ụgha, na-achọkwa iduhie anyị.—Ilu 2:10-16.
NA-AKWANYERE NDỊ ỌZỌ ÙGWÙ
Anyị kwesịkwara ịkpachapụ anya n’ihe gbasara izipụ akụkọ ndị anyị nụrụ banyere ụmụnna anyị. E nwere mgbe ọ na-agaghị adị mma ịkọ ihe ụfọdụ banyere ndị ọzọ á sịgodị na ọ bụ eziokwu. (Mat. 7:12) Dị ka ihe atụ, ọ gaghị adị mma ịkọsawa asịrị, ọ bụrụgodị na ọ bụ ihe mere eme. (2 Tesa. 3:11; 1 Tim. 5:13) A na-enwe ihe mmadụ na-achọbeghị ịkọrọ ndị ọzọ. Anyị kwesịrị ịkwanyere onye ahụ ùgwù, hapụ ya ka o jiri aka ya kpebie mgbe ọ ga-akọ ya. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na anyị akọọ ihe ahụ mgbe onye ahụ na-achọbeghị ịkọ ya, o nwere ike ịkpata nsogbu.
Taa, e nwere ike ịkọsa akụkọ n’egbughị oge, ma ọ̀ bụ eziokwu ma ọ bụ ụgha, ma ọ̀ bara uru ma ọ bụ na ọ baghị uru, ma ọ̀ ga-akpata nsogbu ma ọ bụ na o nweghị ihe o mere. Onye jí ekwentị ma ọ bụ kọmputa zigara mmadụ ozi kwesịrị ịghọta na onye ahụ nwere ike izigara ya ụwa niile ozugbo. N’ihi ya, ka anyị ghara ịna-eme e zitere anyị ozi, anyị ezigara ya ndị niile anyị ma ozugbo. N’agbanyeghị na ịhụnanya “na-ekwere ihe niile,” ọ naghịkwa enyo ihe niile enyo, anyị ekwesịghị ịbụ ndị na-amaghị ihe, na-ekwere ihe ọhụrụ ọ bụla na akụkọ ọ bụla na-atọ ụtọ. (1 Kọr. 13:7) Anyị agaghị ekwere ụgha ma ọ bụ ihe ọ bụla e ji akatọ nzukọ Jehova nakwa ụmụnna anyị anyị hụrụ n’anya. Cheta na ndị na-echepụta ụgha ndị a ma na-akọsa ha na-eme Setan bụ́ Ekwensu obi ụtọ. Ọ bụ ya bụ “nna ụgha.” (Jọn 8:44) N’ihi ya, ka anyị mara ihe, na-echekwa echiche nke ọma banyere ihe anyị ga-eji ozi ndị anyị na-enweta na ọtụtụ ihe anyị na-anụ kwa ụbọchị na-eme. Cheta na Baịbụl sịrị: “Ndị na-amaghị ihe ga-aghọ ndị nzuzu, ma ndị maara ihe ga-eke ihe ọmụma dị ka ákwà isi.”—Ilu 14:18.
^ para. 4 Cheta na ọtụtụ mgbe, e nwere ike ịkọgharị akụkọ ndị e kwuru na ha abụghị eziokwu, kọsawa ha ka akụkọ ọhụrụ.
^ para. 8 Gụọ “Igbe Ajụjụ” dị́ n’Ozi Alaeze Anyị nke Eprel 2010.
AJỤJỤ NDỊ Ị GA-AJỤ ONWE GỊ TUPU I ZIPỤ OZI:
Ebe e si nweta akụkọ a ọ̀ bụ ebe a tụkwasịrị obi?
Akụkọ a ọ̀ ka bụ ihe nzuzo?
È nwere onye ọ ga-emebi aha ya?
Ò nwetụla onye sịrị m kwụsị izitere ya ozi iimel e ziteere m?
ỤLỌ NCHE (NKE A NA-AMỤ AMỤ) Ọktoba 2015
Nyere Nwa Gị Aka Ka Ọ Kpachara Anya n’Ịntanet
Kpachara Anya n’Ebe A Na-emeta Ndị Enyi n’Ịntanet